DAAWO SAWIRAD Gumoomiye Faysal oo kulan casho sharafeed iyo xog wareysiya la qaatay jaaliyada Somaliland ee Washington, DC. |
DAAWO SAWIRAD Gumoomiye Faysal oo kulan casho sharafeed iyo xog wareysiya la qaatay jaaliyada Somaliland ee Washington, DC.
Gudoomiyaha xibiga ucid faysal cali waraabe iyo wafti uu hogaaminayo ayaa beryahanba safar ku marayey Wadanka Maraykanka, gaar ahaana magaalooyinka Minneapolis iyo magaalo madaxda Marykanka ee Washington, DC.
Safarkan ayuu gudoomiyuhu ku indho indhaynayey, dadka reer somaliland ee ku nool Maraykanka wuxuna shirar iyo waraysiyo la qaatay dadka Somaliland ee dagan gobolka menisota, kadibna wuxuu halkaa u sii dhaafay Washington DC . Halkaas oo ay ku kulmeen dowlada Maraykan iyo Jaaliyada dhawaan la asaasay ee Somaliland Community of Greater Washington.
Gumoomiye Faysal Ali wuxuu casho sharafeed xog wareysiya la qaatay yeeshay jaaliyada Reer Somaliland ee degan Washiton oo xalay barafkii ugu horeeyay aad ugu da’ay, oo dad badan oo doonayay in ay la kulmaan uu barafkii xidhay.
Gudoomiyihu wuxuu aad ugu mahadnaqay Jaaliyada dhowaan xafiiska ka furay Washington, DC, isagoo aadna ugu dhiiriyay in loo baahan yahay in dadka ku dhaqan America ay gamcaha is qabsadaan, si ay caruurta wax dhaxal gal ah ugu sameeyaan halkan, iyo waxa wada qabsi lagu sameeyo oo faa’iido weyn u leh Somalilandba.